November 29, 2020 RESTBET 497 RESTBET497 8
အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှာဘော်ဒိုးအပြာရောင်ကလပ်တွင်ရှိသည်။ Trabzonspor Club ကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာခြင်းကြောင့်အစည်းအဝေးကိုရက်စွဲမရှိဘဲရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
ဤတွင် Trabzonspor မှဖော်ပြထားသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ၇၂၅၆ နှင့် ၇၅၅၇ တို့အရဥပဒေနှင့်အညီပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကြေငြာချက်နှင့်အသင်းအဖွဲ့များသို့အကြောင်းကြားစာများတင်သွင်းခြင်းနှင့်အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးများမကျင်းပနိုင်သည့်ကာလကိုတိုးမြှင့်ခြင်း” ကျွန်ုပ်တို့၏သာမန်အထွေထွေညီလာခံကို ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရက်စွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
BETBABA100 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! RESTBET497.COM CANLI CASİNO KAZANÇ RESTBET497.COM ÖDEMELERİ BAŞARILI SİTE SULTANBET542 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI! SULTANBET542 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI! BETBABA100 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI! SULTANBET561 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI! BETBOO868 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI! RESTBET497 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! RESTBET497 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI!
ERDEM December 2, 2020 at 6:50 pm
SALİH December 5, 2020 at 3:30 am
BAHRİ December 6, 2020 at 6:00 pm
SEDA December 9, 2020 at 5:30 pm
EZGİ December 10, 2020 at 2:50 am
TOYGAR December 10, 2020 at 7:00 pm
AYLİN December 13, 2020 at 6:00 am
HİDAYET December 13, 2020 at 7:30 pm